The MYAWADY Daily: June 2018
(၅၅) ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့ကျောက်မျက် ရတနာပြပွဲ ရောင်းချရမှု ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်
ပြည်တွင်း၊ပြည်ပ ကျောက်မျက်ရတနာကုန်သည်များ ကျောက်စိမ်းအတွဲများကို ကြည့်ရှုကြစဉ်။
(၅၅) ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့ကျောက်မျက် ရတနာပြပွဲကို နေပြည်တော်ရှိ မဏိရတနာ ကျောက်စိမ်းခန်းမ ပရဝဏ်အတွင်း ဆက်လက် ကျင်းပလျက်ရှိရာ ပြသရောင်းချရမှု ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက် လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ဇွန် ၂ဝ ရက်မှ ၂၁ ရက်အတွင်း ပုလဲအတွဲ ၃၆ဝ ကို တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ရောင်းချခဲ့ရာ ယူရိုငွေ ၂ ဒသမ ၅၉၈ သန်းတန်ဖိုးရှိ ပုလဲအတွဲ ၃၄၁ တွဲကိုလည်းကောင်း၊ ဇွန် ၂၃ရက်တွင် ကျောက်မျက် အတွဲ ၃၃၆ တွဲကိုတင်ဒါ စနစ်ဖြင့် ရောင်းချခဲ့ရာ ယူရိုငွေ ၁ ဒသမ ၃၇၈ သန်းတန်ဖိုးရှိ ကျောက်မျက်အတွဲ ၆၉ တွဲကို လည်းကောင်း ရောင်းချခဲ့ရပြီး ကျောက်စိမ်းအတွဲ ၆၇၉၅ တွဲကို ဇွန် ၂၄ ရက်မှ ၂၉ ရက်ထိ ပြသရောင်းချ သွားမည်ဖြစ်ရာ ဇွန် ၂၄ရက်တွင် ယူရိုငွေသန်း ၃၈ ဒသမ ၅၃ဝတန်ဖိုးရှိ ကျောက်စိမ်းအတွဲ ၉၇၃ တွဲကိုလည်းကောင်း၊ ဇွန် ၂၅ ရက်တွင် ယူရိုငွေ ၇၄ ဒသမ ၁၂၂ သန်းတန်ဖိုးရှိ ကျောက်စိမ်းအတွဲ ၈၃၃တွဲကို လည်းကောင်း၊ ဇွန် ၂၆ ရက်တွင် ယူရိုငွေ ၈၆ ဒသမ ၈၆၆သန်းတန်ဖိုးရှိ ကျောက်စိမ်းအတွဲ ၈၁၈ တွဲကိုလည်းကောင်း၊ ဇွန် ၂၇ရက်တွင် ယူရိုငွေ ၅၂ ဒသမ ၄၄၁သန်းတန်ဖိုးရှိ ကျောက်စိမ်းအတွဲ ၈၉၂ တွဲကိုလည်းကောင်း၊ ယနေ့တွင် ယူရိုငွေ ၁၁၈ ဒသမ ၆၉၁သန်း တန်ဖိုးရှိ ကျောက်စိမ်းအတွဲ ၉၂၅တွဲကို လည်းကောင်း ရောင်းချခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
ယခုကျင်းပသည့် (၅၅) ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့ကျောက်မျက် ရတနာပြပွဲတွင် ရောင်းချရသည့် တန်ဖိုးများအပေါ် သတ်မှတ်ကောက်ခံမည့် အခွန်အခနှုန်းထားများမှာ အထူးကုန်စည်ခွန် အနေဖြင့် ကျောက်စိမ်း အရိုင်းများ အတွက် ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ ကျောက်မျက်အရိုင်းများ အတွက် ၁ဝရာခိုင်နှုန်းနှင့် ကျောက်မျက်လက်ဝတ် ရတနာအချောထည်များ အတွက် ငါးရာခိုင်နှုန်းတို့ ဖြစ်ကြပြီး ဝန်ဆောင်ခအနေဖြင့် ကျောက်မျက်ရတနာ အရိုင်းများအတွက် သုံးရာခိုင်နှုန်းနှင့် အချောထည်များအတွက် တစ်ရာခိုင်နှုန်းတို့ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ငွေကျပ် ၁၁၇ သိန်းကျော်တန်ဖိုးရှိ စိတ်ကြွဆေးပြားများ ဖမ်းဆီးရမိ
ကချင်ပြည်နယ် မံစီမြို့နယ် အတွင်း ဗန်းမော်မြို့ အမှတ်(၁) မူးယစ်ဆေးဝါး တားဆီးနှိမ်နင်းရေး ရဲတပ်ဖွဲ့စု၏ သတင်းရယူ ဖော်ထုတ်မှုဖြင့် ငွေကျပ် ၁၁၇ သိန်းကျော်တန်ဖိုးရှိ စိတ်ကြွဆေးပြားများ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဗန်းဗော်မြို့ အမှတ်(၁) မူးယစ်ဆေးဝါး တားဆီးနှိမ်နင်းရေး ရဲတပ်ဖွဲ့စုမှ ရဲအုပ်ခါးလီ ဦးစီးသည့်တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် ဇွန် ၂၇ ရက်နံနက် ၁ဝနာရီက သက်သေများနှင့်အတူ မူးယစ်ဆေးဝါး သတင်းအရ မံစီမြို့နယ် ဟန်ထက်ကျေးရွာ ဟန်ထက်-မန်သာကျေးရွာချင်းဆက် ကားလမ်းဆုံတွင် ကြိုတင်စောင့်ဆိုင်းနေစဉ် မန်သာကျေးရွာမှ ဟန်ထက်ကျေးရွာသို့ ဝေလင်းထွန်း မောင်းနှင်ပြီး နောက်မှ သီတာဦး (ခ) မဦးလိုက်ပါလာသည့် မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကိုရပ်တန့် စစ်ဆေးခဲ့သည်။
ထိုသို့စစ်ဆေးရာ ဆိုင်ကယ်ခွကြားရှိ ပီနံအိတ်အတွင်းမှ ဆန်များအတွင်း အပြာရောင် ပလတ်စတစ်ကပ်ခွာအိတ် ၃ဝ အတွင်းထည့်လျက် ကာလတန်ဖိုးငွေကျပ် ၁၁၇၆ဝဝဝဝ ရှိ WY စာတန်းပါ စိတ်ကြွဆေးပြား ၅၈၈ဝနှင့် သီတာဦး(ခ) မဦး၏ လက်ဆွဲအိတ်အတွင်းမှ မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းချငွေဟု ယူဆရသည့် မြန်မာငွေစက္ကူရောရာ ငွေကျပ် ၆၅ဝဝဝ တို့ကို ရှာဖွေသိမ်းဆည်း ရမိခဲ့သည်။
ဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ မူးယစ်ဆေးဝါး များနှင့်အတူ တွေ့ရှိသည့် ဝေလင်းထွန်းနှင့် သီတာဦး(ခ)မဦး မံစီမြို့နေသူနှစ်ဦးကို မံစီမြို့မရဲစခန်းက မယ(ပ)၂၈/၂ဝ၁၈၊ မူး/စိတ်ပုဒ်မ-၁၉(က)/၂ဝ(က)၂၁ ဖြင့် အမှုဖွင့်ဆောင်ရွက် ထားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ပုဂံဒေသရောက် ပြည်ပခရီးသွားများ ရွှေဆံတော်စေတီ ရင်ပြင်တော်ပေါ်မှ နေဝင်၊ နေထွက်ရှုခင်း အလှဓာတ်ပုံရိုက်ကူး
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ညောင်ဦးခရိုင် ပုဂံရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု နယ်မြေဒေသအတွင်း၌ ယခုနှစ် ဇွန် ၂၇ရက်က ပြည်ပခရီးသွား ဧည့်သည်များ စဉ်ဆက်မပြတ် ဝင်ရောက်လေ့လာ လျက်ရှိပြီး ပြည်တွင်း ဘုရားဖူးများလည်း ဘုရားဖူးလာရောက်ကြ လျက်ရှိကြောင်း အဆိုပါ စေတီဂေါပကအဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။
ပုဂံဒေသရောက် ပြည်ပခရီးသွားများနှင့် ပြည်တွင်းဘုရားဖူး ပြည်သူများသည် ပုဂံဒေသရှိ ရှေးဟောင်းဘုရား စေတီပုထိုးများ၊ ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ် လက်ရာများ စသည့် ယဉ်ကျေးမှုလက်ရာများကို လေ့လာသကဲ့သို့ နံနက် ၆ နာရီနှင့် ည ၆ နာရီတို့တွင် ပုဂံမြို့ဟောင်းရှိ အနော်ရထာ မင်းတည်ထားကိုး ကွယ်ခဲ့သော ရွှေဆံတော်စေတီတော် ရင်ပြင်တော်ပေါ်မှ ပုဂံယဉ်ကျေးမှုဒေသရှိ ရှေးဟောင်းဘုရား စေတီပုထိုးများနှင့် တွဲဖက်လှပနေသည့် နံနက်နေထွက်၊ ညနေနေဝင် ရှုခင်းအလှအပများကို မှတ်တမ်းတင် ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးသူများ ယခုနှစ်တွင် များပြားလာလျက်ရှိကြောင်း အဆိုပါစေတီတော် ဂေါပကအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောပြသည်။
ရွှေဆံတော် စေတီတော်ကို လေးထောင့်ပစ္စယာ ငါးဆင့်အထက်၌ ရှစ်ထောင့်ကြာဝန်းခံ၍ ခေါင်းလောင်းပုံရင်ဖွဲ့ခါးပတ် သပိတ်မှောက် ဖောင်းရစ်စသည့် ဝန်းဝိုင်းရှူးတက်ကာ အထွတ်စေတီ တင်ထားကိုးကွယ် ထားသော ရှေးဟောင်းဘုရား တစ်ဆူဖြစ်ပြီး အဆိုပါစေတီတော် ပစ္စယံအထက် ငါးဆင့်ရင်ပြင်တော် ပေါ်တွင် ပြည်ပခရီးသွားများ၊ ဘုရားဖူးပြည်သူများ တက်ရောက်၍ ပုဂံဒေသ၏ အလှအပရှုခင်းဓာတ်ပုံများ ရိုက်ကူးကြကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံတစ်ဝန်း သုံးနှစ်ကျော်အတွင်း ငလျင်လှုပ်ခတ်မှု နှစ်ဆကျော်မြင့်တက်
စစ်ကိုင်းပြတ်ရွေ့ပေါ်ရှိ မြို့များကို တွေ့ရစဉ်။
ယခုနှစ် ငါးလကျော်အတွင်း နိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် ငလျင်လှုပ်ခတ်မှု အကြိမ်ရေ ၉ဝ ကျော်ထိရောက်ရှိနေပြီး ၂ဝ၁၅ခုနှစ်အတွင်း ငလျင်လှုပ်ခတ်မှု အကြိမ်များ ထက်သုံးနှစ်ကျော်အတွင်း နှစ်ဆကျော် ထိမြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်း မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်များအရ သိရသည်။
နှစ်အလိုက် ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုများ အနေဖြင့် ၂ဝ၁၅ခုနှစ်တွင် ငလျင် ၂၃ကြိမ်၊ ၂ဝ၁၆ခုနှစ်တွင် ၃၈ကြိမ်၊ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်တွင် ၆၅ကြိမ်ထိ လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီး ယခုနှစ်တွင် ဇန်နဝါရီ ၁ရက်မှ ယနေ့ထိ ငါးလကျော်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းတွင် စုစုပေါင်း ငလျင် ၉၇ ကြိမ်ထိ လှုပ်ခတ်ထားသည်။
"ဒါက ပထမတစ်ချက် အနေနဲ့ ဖြစ်နိုင်တာက အရင်ကထက် မိုးဇလရဲ့ Local Network အရမ်းကောင်းလာ တာကြောင့်လဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အရင်က ငလျင်တိုင်းတာရေး စက်သုံးလေးလုံးနဲ့ လုပ်နေရာကနေ အခု စင်ကာပူနိုင်ငံမြေကမ္ဘာ စောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့(EOS) ရဲ့ထောက်ပံ့မှုနဲ့ အလုံးရေတွေ ထပ်တိုးလာတယ်။ နောက်ထပ်လဲထပ်တိုး ဖို့ရှိနေတယ် လို့သိရပါတယ်။ ငလျင်အသေးလေးတွေ လှုပ်တာကအစ လှုပ်တဲ့ငလျင်တိုင်းကို သတင်းထုတ်ပြန် နိုင်ပါပြီ။ လှုပ်တာကတော့ အရင်ကတည်းက အခုလိုလှုပ်နေတာပဲလို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ အခုလို အားလုံးကိုဖမ်းမိတော့ အနာဂတ်မြေငလျင် အန္တရာယ် ခန့်မှန်းတွက်ချက်တဲ့ အခါမှာပိုကောင်းလာမယ်။ Data တွေအသုံးချပြီး တော့လုပ်စရာရှိတာ ပိုပြီးလုပ်လာနိုင်တာပေါ့။ ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ ခုလိုမျိုးလှုပ်လာလို့ သိပ်စိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူး။ ပြင်ဆင်စရာရှိတာတော့ ပုံမှန်ပြင်ဆင်ထားရမှာပါ"ဟု အဆိုပါကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာမျိုးသန့်က ပြောသည်။
ကမ္ဘာ့မြေငလျင်ကြောကြီး နှစ်ခုအနက် တစ်ခုပေါ်တွင် တည်ရှိနေသည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ငလျင်ဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ရန် စိုးရိမ်ရသည့် ဒေသများနှင့် ပတ်သက်၍ ဗဟုသုတ၊ အဆောက်အအုံများ၏ ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်မှု စစ်ဆေးခြင်းများ၊ ငလျင်လှုပ်ခတ်ပြီးပါက စုဝေးရမည့်စုရပ်များ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ ကယ်ဆယ်ရေး၊ အပျက်အစီး ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းမှုများ စသည်တို့တွင် အဆင်သင့်အနေအထား မရှိသေးကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက် ပြောပြသည်။
ငလျင်နှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်သူလူထုအား အသိပညာပေးမှုများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စတင်လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်လျက်ရှိပြီး ငလျင်မလှုပ်မီ၊ လှုပ်နေစဉ်၊ လှုပ်အပြီးတို့တွင် ပြုမူဆောင်ရွက်ရမည် တို့ကို Awarenes (နားလည် သဘောပေါက်မှု) ပေးခြင်းများ၊ မကြာခဏ လက်တွေ့လေ့ကျင့် ခြင်းများ လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်ကြောင်း သိရသည်။
(၃၂) ကြိမ်မြောက် မြန်မာ-ထိုင်း ဒေသဆိုင်ရာ နယ်ခြားကော်မတီ အစည်းအဝေး ပထမနေ့ကျင်းပ
မြန်မာကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းနောင်နှင့် ထိုင်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်Lt. Gen. Vijak Siribunsop တို့ အစည်းအဝေးတက်ရောက် လာကြသူများနှင့်အတူ အမှတ်တရစုပေါင်း ဓာတ်ပုံရိုက်စဉ်။
မြန်မာနိုင်ငံ၌ အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပ ပြုလုပ်သည့် (၃၂) ကြိမ်မြောက်မြန်မာ-ထိုင်း ဒေသဆိုင်ရာနယ်ခြား ကော်မတီ အစည်းအဝေးဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် မော်လမြိုင်မြို့ရှိ Strand Hotel ၌ကျင်းပရာ မြန်မာကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး (ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းနောင်၊ ဒုတိယခေါင်းဆောင် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး သန်းထွန်းဦးနှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ၊ ထိုင်းနိုင်ငံမှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် Lt. Gen.Vijak Siribunsop နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက်ကြသည်။
ဦးစွာ မြန်မာကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မင်းနောင်နှင့် ထိုင်းကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် Lt. Gen.Vijak Siribunsop တို့က အမှာစကား အသီးသီး ပြောကြားပြီး နှစ်နိုင်ငံ အဖွဲ့ဝင်များက အပြန်အ လှန်မိတ်ဆက် ကြသည်။
ထို့နောက် နှစ်နိုင်ငံ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များသည် တက်ရောက်လာကြ သူများနှင့်အတူ အမှတ်တရစုပေါင်း ဓာတ်ပုံရိုက်ကြပြီး အဖွဲ့ဝင်များကို ရင်းရင်းနှီးနှီး နှုတ်ဆက်ကာ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။
ယင်းနောက် မြန်မာ-ထိုင်း ဒေသဆိုင်ရာနယ် ခြားကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး အဖွဲ့အစည်းအဝေးကို ဆက်လက်ကျင်းပ ရာမြန်မာကိုယ်စား လှယ်အဖွဲ့အတွင်းရေးမှူး ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး (ကြည်း)မှ ဗိုလ်မှူးချုပ် ခိုင်လင်း၊ ထိုင်းကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အတွင်း ရေးမှူး Maj. Gen. Songtham Sittipong နှင့် မြန်မာ-ထိုင်း နယ်ခြားကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များက (၃၁) ကြိမ်မြောက် မြန်မာထိုင်း ဒေသဆိုင်ရာ နယ်ခြားကော်မတီ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းအား ပြန်လည် သုံးသပ်ခြင်း၊ ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ခြင်း ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ နယ်စပ်ဒေသအတွင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ကိစ္စရပ်များ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲ စေသော ဆေးဝါးများအား ပူးပေါင်းနှိမ်နင်းခြင်း ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ နှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ် ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် အခြားကိစ္စရပ်များအား ကဏ္ဍအလိုက် ဆွေးနွေးကြပြီး ညနေပိုင်းတွင် အစည်းအဝေးကို ရပ်နားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ပြည်တွင်း၊ပြည်ပ သတင်းမီဒီယာအဖွဲ့ မောင်တောဒေသတွင် ကွင်းဆင်းသတင်းရယူ
ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ သတင်းမီဒီယာ အဖွဲ့ငါးခူရပြန်လည် လက်ခံရေးစခန်းတွင် သတင်းရယူစဉ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ မြေပြင်ကွင်းဆင်း သတင်းရယူရန် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ သတင်းမီဒီယာများ ပါဝင်သော သတင်းအဖွဲ့သည် ယနေ့နံနက်ပိုင်းက စစ်တွေမြို့မှ မောင်တောမြို့နယ် အင်းဒင်ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိကြသည်။
ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပသတင်း မီဒီယာအဖွဲ့သည် အင်းဒင်ကျေးရွာတွင် အကြမ်းဖက် ဖြစ်စဉ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရမှုနှင့် ကျေးရွာ၏ ပကတိ အခြေအနေမှန်များကို ကျေးရွာသားများနှင့် တွေ့ဆုံ၍ လွတ်လပ်စွာ သတင်းရယူ ကြသည်။
ထို့နောက် မောင်တောမြို့ အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနရုံးတွင် ဒုတိယခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးရဲထူး၊ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံ၍ ဒေသအတွင်း ပြန်လည်ဝင်ရောက် လာမည့်သူများကို စိစစ်လက်ခံရေး၊ နေရာချထားရေး၊ ဒေသတည်ငြိမ် အေးချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်နေမှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တွေ့ဆုံမေးမြန်း သတင်းရယူ ကြသည်။
မွန်းလွဲပိုင်းတွင် သတင်းမီဒီယာအဖွဲ့သည် ပြန်လည်ဝင်ရောက် လာသူများကို ယာယီလက်ခံမည့် ငါးခူရပြန်လည် လက်ခံရေးစခန်းသို့ ရောက်ရှိကြပြီး ပြန်လည်လက်ခံရေး လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် စခန်းတည်ဆောက် ပြီးစီးမှု အခြေအနေများကို သတင်းရယူကြသည်။
ဆက်လက်၍ စခန်းအတွင်းရှိ တစ်ဖက်နိုင်ငံမှ ပြန်လည်ဝင်ရောက် လာသည့်အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များကိုတွေ့ဆုံ၍ သတင်းရယူခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Senior General Min Aung Hlaing givesagift to Vice Chairman-1 of the Myanmar Media Council U Ohn Kyaing.
Senior General Min Aung Hlaing and party cordially greet the Vice Chairman-1and delegation of the Myanmar Media Council.
The role of media which is the Fourth Estate is important as it can generate various situations for the nation. So the media is urged to serve the national interest asatool through constructive reports on peace and stability and unity of the nation, said Commander in Chief of Defence Services Senior General Min Aung Hlaing at his meeting withadelegation led by Vice Chairman-1 of the Myanmar Media Council U Ohn Kyaing at the parlour of the Bayintnaung Villa here yesterday afternoon.
Present at the meeting together with the Senior General were Deputy Commander in Chief of Defence Services Commander in Chief (Army) Vice-Senior General Soe Win, Chief of the General Staff (Army, Navy and Air) General Mya Tun Oo, Commander in Chief (Navy) Admiral Tin Aung San, Commander in Chief (Air) General Maung Maung Kyaw and senior military offi cers of the Offi ce of the Commander in Chief (Army).
U Ohn Kyaing was accompanied by Vice Chairman-2 Dr. Myo Thant Tin, Secretary U Thiha Saw and members of the council. First, the Senior General and party cordially greeted the Vice Chairman-1and delegation of the council and then held talks with them.
At the meeting, the Senior General said he gave serious attention to the meeting as media or the Fourth Estate is an important institution ofacountry. The current trend of the nation indicates mutual benefi ts with the media.
The Senior General said he has held talks with the Myanmar Media Council foranumber of times since 2012 while holding press conferences and interviews with the media. As the country is lying between powerful countries, it needs united strength.
There must be unity and harmony among the government, the people and all institutions regardless of adopted political system. Media should give priority to further strengthening this strength. The absence of security and political instability are the causes behind the lack of development of the country.Political instability is generated by the various means of the politicians to highlight their activities through the media. Hence, media reports have much impact on peace, stability, progress and unity of the country.
Media should becomeatool for cementing unity. Other countries too respond to any acts that are against their interest as they never tolerate such acts. Therefore, the local media are urged to try for the country to becomeaunited force. There should be constructive writings and acts leading to unity. As news releases only pointing out weaknesses rather than encouraging the public cause demoralization, there should be unbiased news with construction attitude promoting public morality. However, any issue deserving criticism must be criticized. By doing so, it will pave the way for national development in one way. Every citizen needs to cherish their country.
The love for the country goes together with patriotism and courage. Raising the national flfl ag and military flfl ags when battles are won indicates nationalism, patriotism and courage.Likewise, when we stood first in international sport events, we raised our State flag and both the athletes and spectators saluted and sang the nation anthem. This is also indicative of patriotism and nationalism. The spirit of cherishing one’s own country cannot be demoralized. It is important that the media try to help promote patriotism and nationalism.
Only patriotism can reinforce the strength of our country. There might be different attitudes, ideologies and interests but everyone must be the same to cultivate patriotism. Now, our country is pursuing democracy the people have chosen. Other countries are found to be practising democracy in their own ways. We are also practising democracy best suited to our country. As it is the system that the entire people have chosen, it must be fi rm and strong.The country got troubled because of political changes. Our Tatmadaw was born of the people.So we must value the desire of the people.
One cannot do as he wishes in the name of democracy. We must act in accord with the existing rules and laws while trying for the development of the country. For the work of the government elected by our people to be successful, our Tatmadaw is cooperating in ensuring the rule of law, peace and stability and public security. We must defend against any harm to the State, the people and the administrative machinery. Throughout history, the Tatmadaw has been shouldering national defence duties. Some misunderstand that the Tatmadaw is oppressive against the national races. Indeed, we are only protecting our national races. For example, military medical doctors are being sent to the remote areas the Ministry of Health could not reach. Tatmadaw members help carry out development, health and education of regions as much as they can in their assigned regions. They also continuously participate in providing assistance to people atatime when disasters fall. The Tatmadaw attacks those who bully and threat the people with holding arms but not bullies and kills the ethnic people. Efforts are being made for enabling the Tatmadaw to becomeapublic and State reliable Tatmadaw.
The Senior General urged the media as the fourth estate to try hard together to have public and State reliance. Vice Chairman-1 of Myanmar Media Council U Ohn Kyaing said the council has agreed with the Tatmadaw and has already built mutual trust. Veteran journalists in successive eras had strived for ensuring standing of media to be the fourth estate of the country. Sayings of Minister Padetharaja go: the Tatmadaw as “Shoulder of the State, Arms of the State” as well as the media as “Shoulder of the State, Eyes of the State”. The media held the meetings on four estates in regions and states. The media pledged to serve the interest of the State.
Then, the Senior General and members of the Myanmar Media Council frankly exchanged views on attempts to decline trust over the Tatmadaw by releasing fabricated news and rumours for the Tatmadaw on stagingacoup, economic development and getting job opportunities in Rakhine State, building peace with ethnic armed organizations, needs of education promotion for the youths to pursue vocational and education courses, preparations to reconstitute the Myanmar Media Council in 2018 with holding the election once three years, arrangements for making trips to cover news, full contributions of the Tatmadaw and no diffi culties in relations between the Tatmadaw and the government, plans to release appropriate information in English onawider scale to local and foreign media, broadening educative talk about health knowledge, conducting advanced media courses, and efforts of the Myanmar Media Council to create links with global countries and international media. After the meeting, the Senior General accepted gifts from Vice Chairman-1 U Ohn Kyaing and Vice Chairman-2 Dr. Myo Thant Tin of the council.
Then, the Senior General presented gifts to members of Myanmar Media Council and posed for documentary photo.
2962018 Yadanarpondaily by TheMyawadyDaily on Scribd
2962018 Themyawadydaily by TheMyawadyDaily on Scribd
မွေးကင်းစ ဧရာဝတီလင်းပိုင် တစ်ကောင် သေဆုံး
မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး မတ္တရာမြို့နယ် စိန်ကျွန်းကျေးရွာ အနီးတွင် ဇွန် ၂၆ ရက် ညနေ ၃ နာရီက မွေးကင်းစဧရာဝတီ လင်းပိုင်တစ်ကောင် သောင်တင်နေသည်ကို နိုင်ငံခြားသားများ ပို့ဆောင်ပေးနေသည့် မော်တော်ယာဉ်မှ တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ထိန်းသိမ်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့စဉ် သေဆုံးမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ဧရာဝတီလင်းပိုင် ထိန်းသိမ်းရေးတာဝန်ခံ ဦးဟန်ဝင်းထံမှ သိရသည်။
ဧရာဝတီလင်းပိုင် များသည် မိခင်မှမွေးထုတ် လိုက်သည့် အချိန်တွင် အသက်ရှူခြင်းနှင့် ရေကူးခြင်းများကို မလုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း၊ မိခင်သင်ကြားပေးမှသာ လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အတွက် မိခင်နှင့်ကွဲသွားသည့် အချိန်တွင် ယခုကဲ့သို့ သေဆုံးရခြင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း သိရသည်။
"အခုသေတဲ့ ဧရာဝတီလင်းပိုင်က မွေးကင်းစပဲရှိပါသေးတယ်။ မွေးမွေးချင်း သောင်တင်နေတာဆိုတော့ အများကြီးတွေးလို့ ရပါတယ်။ မွေးမွေးချင်းဘာတွေ ဖြစ်ခဲ့လဲဆို တာကိုတော့ မသိနိုင်ပါဘူး။ ဖြစ်နိုင်ခြေ အများဆုံးကတော့ မိခင်နဲ့ အုပ်စုကွဲသွားလို့ အခုလိုမျိုးဖြစ်တာ လို့ မြင်ပါတယ်"ဟု ၎င်းက ပြောပြသည်။
"အခုချိန်က ငါးရစ်ငါးသန် ကာလဆိုတော့ လင်းပိုင်တွေ အစာရှာရင်းနဲ့ အုပ်စုကွဲသွားတာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ပြင် လှိုင်းလုံးတွေကြောင့် ကွဲသွားတာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒီလို ဖြစ်စဉ်မျိုး အရင်လတုန်းကလဲ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသိပညာပေးတဲ့အခါမှာ လင်းပိုင်သားပေါက်တွေကို တွေ့ရှိခဲ့ရင် ဘယ်လိုပြုစု ထိန်းသိမ်းပေးရ မလဲဆိုတာတွေကိုလဲ ထည့်သွင်း သွားမှာဖြစ်ပါတယ်"ဟု ၎င်းက ပြောပြသည်။
သဘာဝသတ္တဝါများ ဖြစ်သည့်အတွက် သဘာဝအတိုင်း ပြန်လွှတ်ပေးခြင်း၊ ကုန်းပေါ်တွင် သောင်တင်တွေ့ရှိပါက ရေစိုအဝတ်ဖြင့်အုပ်၍ နှာခေါင်းပေါက်ဖွင့် ပြုစုပေးခြင်း စသည့်အချက်များ ပြုလုပ်ပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါဧရာဝတီ လင်းပိုင်သည် အလျားသုံးလက်မ၊ လုံးပတ်အရွယ် တစ်ပေ ၁၁ လက်မအထီးသားပေါက် ငယ်ဖြစ်ကြောင်း၊ သေဆုံးသွားသည့် လင်းပိုင်ငယ်ကို ဆေးရည်စိမ်၍ ပညာပေးပြခန်းတွင် ပြသသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာပေး သင်တန်းများပေးသွားမည်
မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးကဏ္ဍတွင် အရေးကြီးသည့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေရန် အတွက်နိုင်ငံတစ်ဝန်း လုံးတွင်စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ သင်တန်းများနှင့် နှီးနှောဖလှယ်ပွဲများကို ယခုနှစ်မှစတင်ကာ ပြုလုပ် ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။
လက်ရှိတွင် ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် တောင်သူများ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သည့် နေရာတွင် မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များ ထုတ်လုပ်နိုင်ရန်နှင့် ခေတ်မီစိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာများ ရရှိအသုံးပြု နိုင်ရန်အတွက် လေ့ကျင့်ပညာပေးရေးလုပ်ငန်းများ၊ သိပ္ပံနည်းကျ စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်များကို အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက် ပေးလျက်ရှိသည်။ ဆက်လက်၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး ကဏ္ဍတွင်ပါဝင်သည့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် နိုင်ငံ တစ်ဝန်းလုံးတွင် စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာသင်တန်းများနှင့် နှီးနှောဖလှယ်ပွဲများကို ပြုလုပ်ပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။
"ဒီကိစ္စကို လွှတ်တော်မှာလဲ ဆွေးနွေးထားပြီးပါပြီ။ အခုဆိုလဲ ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီး ဌာနကစိုက်ပျိုး ပညာပေးရေးနဲ့ ရိတ်သိမ်းချိန်လွန် နည်းပညာပေး သင်တန်းကျောင်း တွေဖွင့်ပြီးတောင်သူတွေ ကိုသင်တန်း တွေပေးနေတာ လဲရှိပါတယ်။ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကလဲ အတည်ပြုထားတော့ နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးမှာ ဆက်လက်ဆောင်ရွက် သွားတော့မှာပါ" ဟု စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးပညာပေးရေးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမြင့်ဦးက ပြောပြသည်။
ထိုသို့တောင်သူများကို သင်တန်းများ ပို့ချပေးပြီး ဆွေးနွေးပွဲများ၊ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲများ ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် တောင်သူများ အနေဖြင့်စိုက်ပျုိးရေး နည်းပညာများကို သိရှိကာလူမှုစီးပွား ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေမည် ဖြစ်ကြောင်း စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။
ငှက်သိုက်ရှာဖွေ စုဆောင်းသူများ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရန် ပြင်ဆင်နေ
ငှက်သိုက်စုဆောင်း ချိန်နီးကပ်လာ နေပြီဖြစ်၍ ငှက်သိုက်ရှာဖွေ စုဆောင်းသူများ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရန် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက် နေပြီဖြစ်ကြောင်း မြိတ်မြို့နယ် ဒေသခံ နေထိုင်သူများနှင့် ငှက်သိုက်ရောင်းချ သူများထံမှ သိရသည်။
အဆိုပါ ငှက်သိုက်များမှာ ဇီဝဇိုးငှက်ငယ်များ၏ အသိုက်များ ဖြစ်ပြီး မျိုးပွားရာသီဖြစ်သော ဇန်နဝါရီလ၊ ဧပြီလ၊ သြဂုတ်လတို့တွင် ဥများဥရန် အသိုက်ဆောက်လေ့ရှိသည်။ အဆိုပါငှက်သိုက်များကို ရှာဖွေစုဆောင်းရန်အတွက်၂ဝ၁၅ ခုနှစ်မှစတင်ကာ အချိန်ကာလ သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပြီး ငှက်သိုက်ရှာဖွေ စုဆောင်းချိန်ကို မတ်လပထမ ပတ်မှဒုတိယပတ်၊ ဧပြီလပထမပတ်မှ ဒုတိယပတ်၊ ဇူလိုင်လ ပထမပတ်မှ ဒုတိယပတ်နှင့်နိုဝင်ဘာ ၂၁ရက်မှ နိုဝင်ဘာလ ကုန်ထိတစ်နှစ်လျှင် လေးကြိမ်ရှာဖွေ စုဆောင်းခွင့် ပြုပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထို့ကြောင့် ယခုအခါ တတိယအကြိမ် ငှက်သိုက်ရှာဖွေ စုဆောင်းခွင့် ပြုပေးချိန်သို့ ရောက်ရှိရန်နီးကပ် နေပြီဖြစ်၍ ငှက်သိုက်ရှာဖွေ စုဆောင်းသူများ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရန် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက် နေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ငှက်သိုက် စုဆောင်းချိန်တွင် ငှက်သိုက်ရှာဖွေ စုဆောင်းသူများသည် ကျောက်ဆောင်၊ လိုဏ်ဂူအတွင်း နံရံကို ခက်ခဲစွာတက်ရောက်၍ ငှက်သိုက်များကို ခူးဆွတ်နိုင်ရန် ကျောက်ဆောင်များကို ငြမ်းဆင်၍ သက်စွန့်ဆံဖျား လိုက်လံစုဆောင်းကြပြီး စုဆောင်းရရှိလာသည့် ငှက်သိုက်များကို ဒေသတွင်း ဈေးကွက်များသို့ ပြန်လည်ရောင်းချ ကြကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ငှက်သိုက်များကို တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ထားဝယ်ကမ်းခြေအနီးရှိ ကျွန်းများ၊ မြိတ်ကျွန်းစု၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ပုသိမ်မြို့ အနောက်တောင်ဘက်ရှိ ကျွန်းများတွင် တွေ့ရှိနေရသော်လည်း တနင်္သာရီတိုင်း ဒေသကြီးအတွင်းရှိ ငှက်သိုက်ကျွန်းပေါင်း ၃၂ ကျွန်းမှသာ အဖိုးတန်းငှက်သိုက်များ ထွက်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ မြိတ်ကျွန်းစုတွင် ငှက်သိုက်များကို ပုလောမြို့နယ်ရှိ မလိကျွန်း၊ ကျွန်းစုမြို့နယ်ရှိ ရေအေးကျွန်းစု၊ ဘုတ်ပြင်းမြို့နယ်ရှိ ပုလုတိကျွန်းစု၊ ကော့သောင်းမြို့နယ်ရှိ ကဆိုင်းလှ၊ ကော့ငန်းကျွန်းစုများမှ အများဆုံး ရရှိနေပြီး အဆိုပါ ကျွန်းစုများအနက် မလိကျွန်းမှ ငှက်သိုက် အများဆုံးရရှိကြောင်း သိရသည်။
တရားမဝင်သယ်ဆောင်လာသော ကျောက်စိမ်းတုံးများ ဖမ်းဆီးရမိ
ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း) ကျောက်မဲမြို့ရှိ အိုရီယမ်တယ်တိုး ဂိတ်အနီးတွင် ယနေ့ နံနက်ပိုင်းက ခရီးသည်တင် Express ယာဉ်ဖြင့် မန္တလေးဘက်မှ တရားမဝင် သယ်ဆောင်လာသော ကျောက်စိမ်းတုံးများ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ကျောက်မဲမြို့မရဲစခန်းမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ အရပ်ဘက်သက်သေများ၊ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းအဖွဲ့သည် ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းများ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်နေစဉ် မန္တလေးဘက်မှ ယာဉ်မောင်း စိုးသန်း မန္တလေးမြို့နေသူ မောင်းနှင်လာသော ခရီးသည်တင်ယာဉ်ကို စစ်ဆေး ရှာဖွေခဲ့သည်။
ထိုသို့ ယာဉ်ကို ရှာဖွေစစ်ဆေးရာ ယာဉ်၏ ဝမ်းဗိုက်အတွင်း တိပ်အဝါများဖြင့်ပတ်၍ သယ်ဆောင်လာသော အရွယ်စုံကျောက်စိမ်း အတုံး ၆ဝဝ၊ အလေးချိန် ၃ဝဝ ကီလိုဂရမ်ခန့်ရှိ ကျောက်ခွဲခြမ်းတစ်ခု၊ အလေးချိန် ၂၂ဝ ကီလိုဂ ရမ်ခန့်ရှိ ကျောက်ခွဲခြမ်းတစ်ခုနှင့် ၁၁ဝ ကီလိုဂရမ်ခန့်ရှိ ကျောက်တုံးတစ်တုံး စုစုပေါင်းကျောက်စိမ်းတုံး ၆ဝ၃တုံးနှင့်အတူ ယာဉ်ပေါ်ပါ ခင်မောင်သန်းထံမှ ကျောက်စိမ်းတုံးများ သယ်မှုနှင့်ပတ်သက်သော စာရွက်စာတမ်းများ ရှာဖွေတွေ့ရှိ သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ယာဉ်မောင်း စိုးသန်း မန္တလေးမြို့နေသူ၊ယာဉ်ပေါ်ပါ ခင်မောင်သန်းတို့ကို ကျောက်မဲမြို့မရဲစခန်းက (ပ) ၂၈၅/၂ဝ၁၈၊ ကျောက်မျက်ဥပဒေပုဒ်မ-၄၂(က)ဖြင့် အမှုဖွင့်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Posted by myawady at 4:14 PM No comments:
ရှေးဟောင်းပေစာထုပ်များ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမရှိစေရန် ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်နေ
စစ်ကိုင်းမြို့ သီတဂူကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓ တက္ကသိုလ်အနီး စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး ရှေးဟောင်း သုတေသနနှင့် အမျိုးသားပြတိုက် ဦးစီးဌာန၊ ဗုဒ္ဓပြတိုက်နှင့် ယဉ်ကျေးမှု ပြတိုက်သို့ လာရောက်လှူဒါန်း ထားသော နှစ်ပေါင်း ၃ဝဝခန့်ရှိ ရှေးဟောင်း ပိဋကတ်တော် ကျမ်းပေစာထုပ်များကို ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု မရှိစေရန် ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေကြောင်း စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး ရှေးဟောင်းသုတေသန နှင့်အမျိုးသားပြတိုက် ဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
အဆိုပါ ရှေးဟောင်းပိဋကတ် တော်ကျမ်းပေထုပ်များကို စစ်ကိုင်းခရိုင် မြင်းမူမြို့နယ် မူးဝ-ရွာထောင်မွေတော် ကျောင်းတိုက်မှ ၂ဝ၁၆ ခုနှစ် မေ ၈ရက်က ကျမ်းပေထုပ် ၅၇ ထုပ်ကို ပထမအကြိမ်အနေဖြင့် လာရောက်လှူဒါန်းခဲ့ပြီး ယခုနှစ် ဇွန် ၂ဝရက်က ဒုတိယအကြိမ် အနေဖြင့် ကျမ်းပေထုပ် ၁၄ထုပ်ကို လာရောက်လှူဒါန်း ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ဒုတိယအကြိမ် လှူဒါန်းထားသည့် ကျမ်းပေထုပ်များကို စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းထားရှိရန် ဆောင်ရွက်နေကြောင်း စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီး ရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့် အမျိုးသားပြတိုက် ဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယဦးစီးမှူး ဦးလှညွန့်က ပြောပြသည်။
အဆိုပါ ကျမ်းပေထုပ်များမှာ ညောင်ရမ်းခေတ်၊ ရတနာပုံခေတ်၊ ကိုလိုနီခေတ် စသည့်ခေတ်များက ပေစာများဖြစ်ပြီး ပိဋကတ်တော် စာပေများဖြစ်ကြောင်း၊ ရှေးဟောင်း ကျမ်းပေထုပ်များကို လှူဒါန်းခဲ့သည့် မူးဝ-ရွာထောင် မွေတော်ကျောင်း တိုက်မှ ဆရာတော်ကို ၂ဝ၁၆ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၈ရက်က ပထမအကြိမ်အလှူငွေ ငွေကျပ် ၅၅ဝဝဝဝ ကပ်လှူပူဇော်ခဲ့ကြောင်း၊ ဒုတိယ အကြိမ်လှူဒါန်းသည့် ပေထုပ်များမှ ပေစာများကို လက်ရှိတွင် တစ်ရွက်ချင်းခွဲထုတ်၍ သန့်ရှင်းရေးများ ပြုလုပ်ကာ စပါးလင်များ သုတ်လိမ်းခြင်း၊ အက္ခရာအစဉ်လိုက် ပြန်စီခြင်းများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပြီး စနစ်တကျထိန်းသိမ်း သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောပြ၍ သိရသည်။
မြန်မာ့ရေထွက်ကုန်များ ဥရောပသို့ ပိုမိုတင်ပို့နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်မည်
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေထွက်ကုန်များ အနေဖြင့် ဥရောပနိုင်ငံများ (EU) ဈေးကွက်သို့ လက်ရှိတစ်နှစ်လျှင် တန်ချိန်တစ်သောင်းခန့်သာ တင်ပို့နေရလျက်ရှိပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ယခုထက်ပိုမိုတင်ပို့နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံမှ ရေထွက်ကုန်များကို ဥရောပ(EU)၏ စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီသည့် ငါးဖမ်းသင်္ဘောများက ဖမ်းမိသည့် ရေထွက်ကုန်များကိုသာ တင်ပို့နေရပြီး ရေငန်ငါးနှင့် ရေငန်ပုစွန်များကိုသာ အဓိကတင်ပို့နေရကြောင်း၊တင်ပို့နိုင်မှုပမာဏမှာ နည်းပါးနေသေးသဖြင့် ဥရောပဈေးကွက်သို့ ယခုထက်မြန်မာ့ ရေထွက်ကုန်များ ပိုမိုတင်ပို့နိုင်ရန်နှင့် ရေထွက်ကုန်ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် MYSAP စီမံကိန်းကို လက်ရှိတွင် ဂျာမနီ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ GIZ နှင့် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ MYSAP စီမံကိန်းကို ရေချိုဒေသများ ဖြစ်သည့် ရှမ်းပြည်နယ်နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးတို့တွင် လည်းကောင်း၊ ကမ်းရိုးတန်းဒေသများ ဖြစ်ကြသည့် ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီးတို့တွင် လည်းကောင်း ပြီးခဲ့သည့် ၂ဝ၁၇ခုနှစ်မှ စတင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး လာမည့် ၂ဝ၂၁ခုနှစ်ထိ ငါးနှစ်စီမံကိန်းဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကာ ဥရောပ(EU)နှင့် ဂျာမနီအစိုးရတို့၏ အထောက့်အပံ့ ယူရို၂၂ဒသမ ၅သန်းဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
"လက်ရှိမှာတော့ မွေးမြူရေးကန်ဧက တစ်ထောင်လောက်ကိုတော့ ဝန်ကြီးဌာနက အခုဆို ရေထွက်ကုန်ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ အတွက် MYSAP စီမံကိန်းကို မနှစ်ကစပြီး ထိုးထားပြီးပါပြီ။ ငါးမွေးသူတွေကလဲ သူတို့ကိုယ်တိုင် သတ်မှတ်စံနှုန်းတွေ အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့ တော့လိုပါတယ်"ဟု ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမြင့်ဇင်ထူးက ပြောပြသည်။
လက်ရှိ ဥရောပဈေးကွက်သို့ တင်ပို့ရာတွင် ငါးမြစ်ချင်းကိုသာ အများဆုံးတင်ပို့ နေရကြောင်း၊ မြန်မာ့ရေထွက်ကုန်ကို အခြားနိုင်ငံများသို့လည်း တင်ပို့လျက်ရှိရာ တစ်နှစ်လျှင် တန်ချိန်သန်း တစ်ထောင်ခန့်ထိ တင်ပို့နေရပြီး ဥရောပဈေးကွက် သို့လည်း ယခုထက်ပိုမို တင်ပို့နိုင်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိကြောင်း၊ ရေထွက်ကုန်များကို ယခုနှစ်ငါးလ တာကာလအတွင်း ပင်လယ်ရေကြောင်းမှတစ်ဆင့် ပြည်ပသို့ တန်ချိန် နှစ်သောင်းကျော် တင်ပို့ထား နိုင်ကြောင်း ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
ဆန်စပါးတိုင်းတာရေးပစ္စည်းများ စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်၍ သက်သေခံလက်မှတ် ထုတ်ပေးရန်စီစဉ်
ပြည်တွင်း၌ ဆန်စပါး ရောင်းဝယ်ရာတွင် အသုံးပြုနေသည့် ဆန်စပါးတိုင်းတာရေး ပစ္စည်းများအတွက် စံချိန်စံညွှန်း သတ်မှတ်ကာ သက်သေခံလက်မှတ်များ ထုတ်ပေးနိုင်ရန် စီစဉ်နေကြောင်း ဆန်စပါးပညာရှင် ဒေါက်တာ မျိုးအောင်ကျော်ထံမှ သိရသည်။
အဆိုပါ လုပ်ဆောင်မှုကို ရန်ကုန်မြို့ရှိ သုတေသနနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှု ဦးစီးဌာနမှ အမျိုးသားတိကျစွာ တိုင်းတာခြင်း နည်းပညာသိပ္ပံ (National Institute Of Metrology Myanmar-NIMM) ၌ ဂျပန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး အေဂျင်စီ (JICA) ၏ အကူအညီဖြင့် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပြီး ယခုအခါ ဝန်ထမ်းများအတွက် လိုအပ်သည့် သင်တန်းများပေး လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
''ဒီလိုလုပ်ဆောင်ဖို့ ထိုင်းနိုင်ငံကို သွားလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ ဟိုမှာက ဒီလိုသုတေသန ဌာနက စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ လက်အောက်မှာ ရှိပါတယ်။ ဒီမှာက အရင်တုန်းကတော့ သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာ ဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်၊ အခု ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်မှာ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါနဲ့ လိုက်လျော ညီထွေဖြစ်ဖို့ ဆရာတို့ဘက်ကနေ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှာရှိတဲ့ စားသုံး သူရေးရာ ဦးစီးဌာနနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး အဲဒီက ဝန်ထမ်းတွေကို ဆန်စပါးလုပ်ငန်းတစ်ခု လုံးမှာလုပ်ကိုင်နေတဲ့ အခြင်အတွယ် ပစ္စည်းတွေ၊ စက်ကိရိယာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်အောင် လေ့ကျင့်ပေး နေတာတွေ ရှိပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီကဏ္ဍတစ်ခုလုံးကို လုပ်ဆောင်ရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကြိုးပမ်းလုပ်ကိုင် နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်'' ဟု ဒေါက်တာမျိုးအောင်ကျော် ကပြောသည်။
ဆန်စပါး ရောင်းဝယ်ရေးတွင် အခြင်အတွယ်ကွာဟခြင်း များဖြစ်ပါက ရောင်းသူနှင့် ဝယ်သူကြား ယုံကြည်မှု ပျက်ပြား စေသကဲ့သို့ မလိုလားအပ်သော နစ်နာဆုံးရှုံးမှု များလည်း ရှိနိုင်သည်။ ယခုနောက်ပိုင်း ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်တွင် အခြင်အတွယ်များ ထုတ်လုပ်ရာ ကုမ္ပဏီအလိုက် စံသတ်မှတ်ချက်များကို ပြောဆိုအာမခံ နေကြသော်လည်း နိုင်ငံအဆင့် အသိအမှတ်ပြု စံသတ်မှတ်ချက် အခြေအနေ မျိုးဖြစ်လာစေရန် ယခုအခါ အမျိုးသားတိကျစွာ တိုင်းတာခြင်း နည်းပညာသိပ္ပံ၌ သင်တန်းပေးနေခြင်း ဖြစ်သည်။
''ရောင်းရင်တော့ ဘယ်လို၊ ဝယ်ရင်ဘယ်လို ဆိုတာမျိုးက တကယ်ကို စနစ်ကျပြီလို့ မဆိုနိုင်ပါဘူး။ အရင်တုန်းက အလေးတုံးကြီး တွေဆိုရင် သမာဓိအလေးနဲ့ မှန်၊ မမှန်စစ်ဆေး လို့ရပေမယ့် အခု ဒစ်ဂျစ်တယ် ကတ္တားတွေ၊တိုင်းတာရေး ပစ္စည်းတွေအနေနဲ့ စံသတ်မှတ်ချက်ဆိုတာ သိပ်အရေးကြီးပါတယ်''ဟု ဒေါက်တာမျိုးအောင်ကျော် ကပြောသည်။
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီးသွား ရောက်ရာမှ ပြန်လည်ရောက်ရှိ
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်အား ဒုတိယ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း ) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းနှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများက နေပြည်တော် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တွင် ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်စဉ်။
ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Gen. Tarnchaiyan Srisuwan ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ထိုင်း နိုင်ငံသို့ချစ်ကြည်ရေး ခရီးရောက်ရှိနေသည့် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သော မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စား လှယ်အဖွဲ့သည် ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်း တွင်ပတ္တရားမြို့ရှိ၊ U-tapao လေဆိပ် မှပြန်လည်ထွက်ခွာ ကြသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့် ဇနီးဒေါ်ကြူကြူလှ ဦးဆောင်သည့် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော် ဒုတိယပူးတွဲစစ်ဦးစီးချုပ် Gen. Chaichana Nakkerd နှင့်ထိုင်းဘုရင့် တပ်မတော် အရာရှိကြီးများ၊ ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ် ဦးချမ်းအေး၊ မြန်မာစစ်သံ(ကြည်း၊ရေ၊လေ) ဗိုလ်မှူးချုပ် ခင်ဇော်နှင့် တာဝန်ရှိသူများက လေဆိပ်တွင်ပို့ဆောင် နှုတ်ဆက်ကြသည်။
ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် ညနေပိုင်းတွင် နေပြည်တော် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာလေဆိပ် သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိကြရာ ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ် ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းနှင့် ဇနီး၊ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး(ကြည်း၊ရေ၊လေ) ဗိုလ် ချုပ်ကြီး မြထွန်းဦးနှင့်ဇနီး၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အောင်စန်းနှင့်ဇနီး၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်(လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်မောင်ကျော်နှင့်ဇနီး၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ တပ်မတော် အရာ ရှိကြီးများ နှင့်ဇနီးများ၊ နေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူးဗိုလ်ချုပ် မြင့်မော်နှင့် တာဝန်ရှိသူများက လေဆိပ် တွင်ကြိုဆို နှုတ်ဆက်ကြသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွင် အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် လိုက်ပါသွားသည့်ဇနီး ဒေါ်ကြူကြူလှနှင့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှ တပ်မတော်အရာရှိ ကြီးများပြန်လည် လိုက်ပါလာခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Senior General Min Aung Hlaing and party are seen off at U-tapao Airport in Pattaya by senior military offifi cers from the Royal Thai Armed Forces.
Commander-in-Chief of Defence Services Senior General Min Aung Hlaing and the Tatmadaw goodwill delegation who were visiting Thailand at the invitation of Gen. Tarnchaiyan Srisuwan, Chief of Defence Force of Royal Thai Armed Forces, left U-tapao Airport in Pattaya yesterday afternoon.
Senior General Min Aung Hlaing and wife Daw Kyu Kyu Hla and delegation were seen off at the airport by Deputy Chief of Joint Staff of the Royal Thai Armed Forces Gen. Chaichana Nakkerd, senior military offi cers from the Royal Thai Armed Forces, Minister of Myanmar Embassy in Thailand U Chan Aye, Myanmar Military Attaché (Army, Navy and Air) Brig-Gen Khin Zaw and officials.
The Senior General and delegation arrived back at Nay Pyi Taw International Airport in the evening and were welcomed by Deputy Commander-in-Chief of Defence Services Commander-in- Chief (Army) Vice-Senior General Soe Win and wife, Chief of the General Staff (Army, Navy and Air) General Mya Tun Oo and wife, Commander-in-Chief (Navy) Admiral Tin Aung San and wife, Commander-in-Chief (Air) General Maung Maung Kyaw and wife, senior military offi cers of the Office of the Commander-in-Chief (Army) and their wives, Commander of Nay Pyi Taw Command Maj-Gen Myint Maw and officials.
Members of the delegation, Daw Kyu Kyu Hla and senior military offi cers of the Offi ce of the Commander-in-Chief also arrived back on the same flight.
2862018 Yadanarpondaily by TheMyawadyDaily on Scribd
2862018 Themyawadydaily by TheMyawadyDaily on Scribd